Liverpool oo dalab ka kooban kala doorashada laba xiddig iyo lacag u bandhigtay Atletico Madrid si ay kaga soo qaadato Saul – Gool FM
Liverpool oo dalab ka kooban kala doorashada laba xiddig iyo lacag u bandhigtay Atletico Madrid si ay kaga soo qaadato Saul
Ahmed Nur July 22, 2021
(Liverpool) 22 Luulyo 2021. Iyadoo muddooyinkii dambe kooxda kubadda cagta Liverpool si aad ah loola xiriirinayay saxiixa Saul Niguez ayay Reds dalabkii ugu horreeyay ee rasmi ah u gudbisay kooxda Atletico Madrid.
Sida laga soo xiganayo wargeyska Spain kasoo baxa ee Diario Sport, kooxda Liverpool ayaa u bandhigtay dhiggeeda dalab ka koobay lacag gaareysa 40 milyan oo euro oo lagu darayo midkood Xherdan Shaqiri ama Jordan Henderson iyadoo ay xusid mudan tahay in kala doorashada labada xiddig ay leedahay kooxda Madrid ka dhisan.
Doonista Liverpool ee Saul ayaa qalqal xoog leh uu soo food saaray maalmihii u dambeeyay kaddib wada xaajoodkii u dhexeeyay Barcelona iyo Atletico Madrid kaasoo ay ku doonayaan inay isku weydaarsadaan 26-jirka khadka dhexe ka ciyaara iyo weeraryahanka Barca ee Antoine Griezmann.
Yeelkeede, Saul ayaa lumiyay booskiisii koowaad ee shaxda Macallin Diego Simeone, waxayna xagaagan u badan tahay inuu ka hayaamayo garoonka Wanda Metropolitano.
Chelsea oo dooneysa inay dib usoo ceshato Eden Hazard
Manchester United oo horumar ka sameyneysa soo xero gelinta Raphael Varane... (Maxaa soo kordhay?)